Qarammada Midoobey: Heshiiskii Isfahamka Badda waa in loo tixgeliyo mid aan la cuskan karin
Waa guul u soo hoyatey Shacabka Soomaaliyeed oo ka dhiidhiyey isku daygii in dhulkooda lala wareego... Waa difaacii badda oo guul laga gaaray...
SomaliTalk.com | March 13, 2010 | Updated: March 14, 2010
Qoraal kooban oo March 12, 2010 lagu faafiyey shabakadda rasmiga ah ee Qarammada Midoobey (UN) ayaa shaaca ka qaaday in Heshiiskii Is-fahamka (MOU) ee dhex maray DFKMG iyo Kenya "in Baarlamaanka Federaalka kumeelgaarka ay diideen is-afgaradkaas, sidaas daraadeedna waa in loo tixgeliyo mid aan lagu hawl geli karin ama la cuskan karin". Qormada kooban ee UN-ka ayaa u qornayd sidan:
Sidee ku suurtagashay in UN aqbasho go'aankii Baarlamaanka Soomaaliya?
Jawaabta su'aashaas waxaa laga fahmi karaa qomadan hoose:
Heshiiska loogu magac daray is-fahamka (memorandum of understanding ama MOU) waxa uu magaalada Nairobi ku dhexmaray Dawladda Federaalka kumeelgaarka (DFKMG) iyo Kenya. Dhanka Soomaaliya waxaa u saxiixay C/raxmaan C/shakuur Warsame, wasiirka xiriirka caalamiga ah), waxaana heshiiskaas la saxiixay April 7, 2009. Maalin kaddib April 8, 2009 ayaa ra'iisul Wasaaraha DFKMG waxa uu Qoraal u qoray Ban-ki Moon, qoraalkaas oo ku saabsanaa xogta badda oo ay DFKMG u gudbisanaysay UN-ka, waxaa xogtaas qayb ka ahaa heshiiska Is-faham (MOU). April 14, 2009 ayaa website-ka UN-ta lagu daabacay qoraalkii Cumar C/rashiid iyo heshiiskii is-fahamka - Waxaa dhinac socdey Kenya oo xogteeda u gudbisay UN-ka iyadoo cuskanayay Heshiiskaas is-fahamka.
Is-fahamkaas in uu dhaqan galo waxaa aad ugu ololeeyey Ra'iisul Wasaare kuxigeenka DFKMG, Cabdiraxmaan Aaden Ibraahim (Prof. Ibbi). Markii baarlamaanku diidey heshiiska ayaa Prof. Ibbi oo si bareer ah u taageeraya Is-fahamkaas waxa uu August 19, 2009 waraaq u qoray Qarammada Midoobey. Warqaddaas oo uu ku qoray magaca Cumar C/rashiid, laakiin uu isagu (Prof. Ibbi) saxiixay. (Cumar Cabdirashiid waxa uu ka mid ahaa saraakiishii markii ugu horeysey aadka u difaacay heshiiska MOU ee duudsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed dhul badeed aad u baaxad weyn.)
Waxa kale oo heshiiskan Is-faham garab weyn u ahaa Madaxweynaha DFKMG, Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Sababtoo ah baarlamaanku markii ay diideen heshiiskaas Is-faham ayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheikh Aaden Maxamed Nuur (Aaden Madoobe) waxaa cadaadis ku saaray xildhibaano si go'aankaas uu ugudbiyo Sheikh Shariif si uu u saxiixo muddo labaatan iyo kow (21) maalmood gudahood ah, kaddibna lagu soo saaro faafinta rasmiga ah ee xukuumadda isla markaasna nuqul loo gudbiyo UN-ta (ee ma ahayn sidaan hore u daabacnay in uu durbadiiba gudbey Aaden Madoobe).
Sheikh Shariif xeerkii kuma soo celin Baarlamaanka muddadii loogu talo galay ee uu dhigayo Dastuurka FKMG - ilaa hadda ma jirto wax muujinaya in uu saxiixay xeerkii diidmadii baarlamaanka ee Is-fahamka. Sheikh Shariif si arrintaas aan loogula xisaabtamin waxa uu ku dadaaley in xukuumaddiisu aysan yeelay Garyaqaanka Guud ee Dawladda (Attorney General) - (cidna uma magacowna xafiiskaas, waana xafiiskaas halka loo gudbiyo go'aanka Barlamanka kaddib marka Madaxweynuhu saxiixo, kuna soo saara faafinta rasmiga ah ee Dowladda).
Cumar C/rashiid waxa uu u muuqday in uu ka xumaaday in magaciisa la adeegsado isagoo aan lagala tashan oo markaas safar ugu maqnaa gobollo kamid ah dalka, in UN-ta loo diro waraaq la sheegay in uu isagu qoray. Laakiin ficil rasmi ah kama uusan qaadan muddo bil iyo bar ah. Taasi waxay is bedeshay 10-kii October 2009 markaas oo uu qoray qoraal uu ku taageerayo go'aankii Baarlamaanku ku diidey Heshiiska Is-fahamka. Waxana uu qoraalkaas u dhiibey xubno ka tirsan xafiiskiisa, laakiin waxaa muddo kaddib caddaatay in xafiisku uusan warqaddii u gudbin UN-ka.
Waxaa hadda cad in Qarammada Midoobey garwaaqsatay in aan arrintaas la af xiri karin. Sidaas daraadeedna ay qoraal kooban ku caddeeyeen nuxurka heshiiskaasi "in Baarlamaanka Federaalka kumeelgaarka ay diideen is-afgaradkaas, sidaas daraadeedna waa in loo tixgeliyo mid aan lagu hawl geli karin ama la cuskan karin". Sidaas ayaa Qarammada Midoobey waxay ku taageertay go'aankii baarlamaanka DFKMG ay heshiiskaas Is-faham kaga dhigeen WAXBA KAMA JIRAAN (NULL & VOID).
* Qeexid: Kelmedda actionable waa kelmed loo adeegsado xagga qaanuunka oo aad u xoog weyn. Tusaale ahaan Qaamuuska Oxford Dictionary waxa uu "actionable" ku macneeyey: "Law giving sufficient reason to take legal action". Sidaas daraadeed, marka la yiraahdo non-actionable waxay si qayaxan u muujinaysaa in aan arrinta laga hadlayo loo cuskan karin sharci ahaan. Sidaas daraadeed marka UN-ti tiri MOU waxaa loo tixgelinayaa non-actionable, macnaheedu waa in Qarammada Midoobay ay si cad u qeexday in uu Heshiiskii Is-fahamka ee Somalia/Kenya noqonayo VOID ama waxba kama jiraan aan la cuskan karin sharci ahaan, loona tixgelinayo mid aan lagu hawl geli karin qaanuun ahaan.
Faafin: SomaliTalk.com | March 13, 2010
Mahad celin gaar ah:
Bahda SomaliTalk waxay mahad ballaaran u jeedinayaan akhristayaasha faraha badan ee durbadiiba nala soo xiriiray. Qaar kamid ah jawaabihii Akhristayaasha Ka Akhri Halkan.